China Inoramba Yakanyanya Kukosha Shongwe Yepasi Pose Indasitiri Yemabhizimusi Ripoti
Vagadziri vatatu vakuru vekuGerman Volkswagen, BMW naDaimler vakabatsirwa ne "pamusoro-pavhareji chiyero" kubva mukudzoserwa kwemusika kuChina sezvo yavo Q3 yekutengesa kuChina yakawedzera nezvikamu zvipfumbamwe muzana zvichienzaniswa negore rapfuura, EY yakacherekedza. BERLIN, Zvita 23 (Xinhua) - Musika weChinese zvakare pr ...
China Inogadzirisa Mitero Pane Zvakatumirwa Kunze
China ichagadzirisa mitengo yekunze kunze kwenyika pane zvakawanda zvigadzirwa kutanga Jan. 1, 2021 kutsigira kusimudzira paradigm nyowani yekusimudzira nekusimudzira kusimudzira kwemhando yepamusoro, sekureva kweCustoms Tariff Commission yeState Council. Zvenguva yekunze tariffs yakaderera pane inonyanya kufarirwa ...
China Kubvumidza Simbi Yezvinhu Zvekunze Gore Rinotevera
Kutanga kubva muna 2021, China ichatendera kupinzwa patsva kwesimbi nesimbi zvinhu zvinosangana neyakajairwa nyika sezvo zvisingaite tsvina, zviremera zvakati. Zvakamanikidzwa zvinodiwa pakupinza manejimendi ekushandura zvakare simbi nesimbi zvinhu zvakatemwa, sekuzivisa ...
France Inosheedzera 8-Bln-Euro Chirongwa Kununura Inorwara Mota Indasitiri
Mutungamiri weFrance Emmanuel Macron nemusi weChipiri vakaparura hurongwa hwekununura mabhiriyoni masere emadhora (8.78 bhiriyoni emadhora ekuAmerica) kubatsira kudzora indasitiri yemotokari yakarova zvakanyanya neyakavharwa necoronavirus. Izvo chirongwa chinotarisa kugadzirwa kwemotokari dzakatipoteredza. "Matanho ...